Dr. Tint Swe's Writings: Ovarian cysts မျိုးဥအိမ်အိတ်များ
Ovarian cysts မျိုးဥအိမ်အိတ်များ
(၁) ဆရာရှင့် ဆောင်းပါးတွေမှာ ဖတ်ဖူးတာတော့ အရွယ်အစားသိပ်မကြီးခင်5cm အောက်ရှိချိန်မှာ အစားသောက်ကို ဆင်ခြင်ရမယ်၊ အသားလျော့စားရမယ်၊ အသီးအရွက်များများစားရပါမယ်၊ အီစထရိုဂျင်ကိုလျော့ချမယ်၊ DIM ကိုပုံမှန် သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် အရွယ်အစား ငယ်သွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခက်တာက DIM (Diindolymethane) ကို ရန်ကုန်မှာ လုံးဝရှာလို့ မရပါဘူးရှင့်။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီးအတော်များများမှာ ဒီလို case မျိုးကြုံတွေ့ နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အမျိုးသမီးထုကြီးအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားအကြံကောင်းလေးလိုချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
(၂) ညီမမှာလည်း ရေအိတ်ရှိတယ်လို့ DR က ပြောတယ်။ အခုလ ရာသီလာတာလည်း ၂ ရက်ထဲ။ ဘယ်ဘက် သားအိမ်ရှိတဲ့ အခြမ်းကလည်း တင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ရမလား။ ရေအိတ်ရောင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရမလားရှင့်။ ရေအိတ်ရောင်တယ်ဆို ဘာဆေးသောက်ရမလဲရှင့်။ ကလေးလဲ အရမ်းလိုချင်နေပါပြီ။
မေးတဲသူတွေ အသက်မသိပါ။ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာတော့ သိပေမယ့် ရာသီ မသိပါ။ အိမ်ထောင်ရေး မသိပါ။ ဘာခံစားနေကြရသလည်း မသိပါ။ ဆေးစစ်သလား မသိပါ။ သားအိမ်နဲ့ မျိုးဥအိမ်ရောဂါအတော်များများ (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်မှသိတယ်။
Diindolylmethane (DIM) ကို ဆရာညွှန်ခဲ့ဘူသလားဆိုတာ မမှတ်မိပါ။ ဒီဓါတ်ကို ကြွက်နို့ဗိုင်းရပ်စ်ကနေဖြစ်စေတဲ့ ရှားတဲ့ (RRP) အသက်ရှူလမ်းကင်ဆာတမျိုးမှာသုံးတယ်။ ဒုတိယမေးခွန်းထဲက ရေအိတ်ရောင်တယ်ဆိုတာ ဆေးပညာမှာတော့ မရှိပါ။ ရောင်တယ်ဆိုတာ နာမယ်-ရောင်မယ်-ပူမယ်-နီမယ်-သူ့တာဝန်မလုပ်နိုင်ဖြစ်မယ်။ ဥပမာ သွားဖုံးရောင်နေတာမျိုး။
မေးခွန်းတွေမှာ ရေအိတ်လို့ရေးကြတာများတယ်။ အရပ်ခေါ်တွေက အတော်ဝေခွဲရခက်တယ်။ မေးရင် ဆေးစာရွက်ထဲက စာလုံးပေါင်းကိုသိချင်တယ်။ ရေအိတ်ဆိုတာထဲမှာ ရေ-အရည်သာမဟုတ် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အရည်ကြည်၊ အရည်ပျစ်၊ သွေး၊ ချောကလက်၊ ဆံပင်-ကိုယ်မွှေး၊ အရိုး-သွား အကုန်ပါနေနိုင်တယ်။ မနေ့ကမေးတဲ့တယောက်ကတော့ ဗိုက်တနေရာ နာနေတာလို့ သူများတွေကရေအိတ်ပြောတာနဲ့ ဘယ်ကဆေးစာလည်းမသိ အဲတာပဲသိချင်လို့ လာမေးနေတယ်။ ကိုယ့်ရောဂါကို သိချင်ပျောက်ချင်တာမဟုတ်ပဲ ရေအိတ်ဆိုတာပဲစွဲလမ်းပြီး မေးနေတာ။
အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ မျိုးဥအိမ်တစုံစီပါတယ်။ သူ့ထဲမှာ အလုံး (အကျိတ်) ဖြစ်တာကို Ovarian cysts လို့ခေါ်တယ်။ သေးသေးလေးကနေ ကိုယ်ဝန်မွေးကာနီးအရွယ်အထိကြီးနိုင်တယ်။ အရွယ်ကောင်းတွေမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ သွေးဆုံးပြီးသူတွေ ၁၅% သာဖြစ်နိုင်တယ်။ မျိုးဥအိမ်ကနေထုတ်ပေးနေတဲ့ (FSH) နဲ့ (LH) ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ အချိုးအစားမမျှလို့ ဖြစ်လာရတယ်။
- Graafian or follicular cysts အမျိုးမစားကသေးတယ်။ အလိုလိုပျောက်သွားနိုင်တယ်။ ဗိုက်စူးပြီးနာတတ်တယ်။ ၂၅% သောအမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တယ်။ တဖက်ထဲမှာဖြစ်တာများတယ်။
- Corpus luteum cysts ဆိုတာ လစဉ်မျိုးဥထွက်အပြီးမှာဖြစ်တယ်။ LH ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ အမှန်က ပုံမှန်ဖြစ်ရမယ့် (ဖေါ်လီကယ်) ဖြစ်တာပါ။ ဒီဟာကနေ (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ဟော်မုန်းထုတ်ပေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်မလာရင် ပျက်စီးသွားမယ်။ အဲတာမျိုးဖြစ်မလာရင် အလုံးလည်းမဖြစ် ဟော်မုန်းလည်းမထုတ်ပါ။ ဆက်ကြီးလာခဲ့ရင် ဗိုက်နာမယ်။ ပေါက်ထွက်ရင် စူးရှပြီးနာမယ်။ ဒီဟော်မုန်းက မျိုးဥထွက်ဘို့လုပ်ပေးတယ်။ (ကောပတ်းစ်လူတီယမ်) ဖြစ်ဘို့လုပ်ပေးတယ်။ အကျိတ်ဖြစ်ရင်တော့ ဆက်ကြီးပြီး အဲတာမျိုးမလုပ်နိုင်ပါ။
- Hemorrhagic cysts သွေးပြည့်နေတဲ့မျိုးဥအိမ်အကျိတ်
ပေါက်ထွက်ရင် ဗိုက်အောက်ပိုင်းကနာမယ်။ အကျိတ်ထဲမှာ သွေး အရည်ရောအခံပါရှိနိုင်တယ်။
- Dermoid cysts (ဒါးမွိုက်ဆစ်စ) ဆိုတာ ကင်ဆာမဟုတ်အလုံးတမျိုးဖြစ်တယ်။ သူ့ထဲမှာ အဆီ၊ အရိုး၊ အရိုးနု၊ အမွှေးစတာတွေ ပါနေနိုင်တယ်။ ၁၅ စင်တီမီတာလောက်အထိကြီးနိုင်တယ်။ ရောင်ရင်တော့ နာမယ်။ အပင်းလို့ခေါ်ကြတာမျိုး။
- Chocolate cysts ချောကလက်ဆစ်စ်ဆိုတာကို Endometrial cysts လို့လည်းခေါ်တယ်။ Endometriosis သားအိမ်ရောဂါ ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တယ်။ သားအိမ် (တစ်ရှူး) တွေက သားအိမ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရောက်နေတဲ့ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ရာသီဖြစ်စဉ်မှာ ပထမလဝက်မှာ တက်လာတဲ့ (အီစထိုဂျင်) ကနေသက်ရောက်တယ်။ သွေးတွေက ကြာတော့ အရောင်ပြောင်းရာကနေ ချောကလက်ရောင်ဖြစ်လာတယ်။ ဗီတာမင် (ဒီ) နည်းသူတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) နည်းနေမယ်။
- Cystadenoma အကျိတ်ကတမျိုးဖြစ်တယ်။ မျိုးဥအိမ်အပြင်လွှာကနေဖြစ်တယ်။ ၃ဝ စင်တီမီတာအထိကြီးနိုင်တယ်။
- Multiple cysts အကျိတ်တွေအများကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်။ Polycystic ovaries လို့ခေါ်တယ်။ Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) ရောဂါနဲ့ မတူပါ။
- Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) ဆိုတာ မျိုးဥအိမ်မျာအလုံးအကျတ်လေးတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်။ ရာသီမမှန်တာ နဲ့ ကျား-ဟော်မုန်းများနေတာ ၂ ခု ဖြစ်တယ်။ ကျား-ဟော်မုန်းများနေသူမှာ ဝက်ခြံပေါက်မယ်၊ အမွှေးပေါက် များမယ်၊ လူဝမယ်၊ အဆီပြန်မယ်၊ ကလေးမရဖြစ်မယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အဖြစ်မနည်းပါ။ မကြာမကြာမေးကြတယ်။
- Ovarian cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာဆိုတာ အသက်ကြီးမှသာဖြစ်တယ်။ ပျမ်းမျှ ၆၃ နှစ်အရွယ်။ လူကဝရင်ပိုဖြစ်တယ်။ ကလေးမမွေးဘူးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
မျိုးဥအိမ်အကျိတ်ရှိနေရင် ဒါတွေခံစားရနိုင်တယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်း အနေရခက်တယ်။ အစာမကျေသလိုနေမယ်။ ဖိအားဖြစ်နေသလိုခံစားရမယ်။ ဖေါင်းနေတာစမ်းလို့သိ မြင်လို့ရမယ်။ အောင့်သက်သက်ကနေ စူးရှရှနာမယ်။ အတူနေချိန်မှာ မနာသင့်ပဲနာမယ်။ ရာသီလာရင်နာမယ်။ ရာသီမမှန်ဖြစ်မယ်။ ကလေးမရနိုင်ဖြစ်မယ်။ ဆီးခဏခဏ သွားချင်မယ်။ ဆီးကုန်ကာနီးနာမယ်။ ဝမ်းမမှန်ဖြစ်မယ်။ ပျို့ချင်မယ်။ အားယုတ်မယ်။ အစာမကျေဖြစ်မယ်။
တခုချင်းအတွက် ကုသနည်းတွေရှိတယ်။ တယောက်ချင်းအတွက်ကုသနည်းရွေးရတယ်။ တချို့ဆရာဝန်တွေက Vitamin D နဲ့ Antioxidants တွေလည်းပေးရတယ်။ ၃-၆ လနေရင် ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ Progesterone 100-200mg/day ပေးလေ့ရှိတယ်။ Vitamin D 5000 IU အနည်းဆုံး ပေးတယ်။ Arginine 1600mg/day နဲ့ Cysteine 1200mg/day ကိုပါပေးတယ်။ ဒီဆေးတွေက Antioxidants (Amino acids) တွေဖြစ်တယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းတွေ (၃) မျိုးရှိတယ်။ အသက်ကြည့်ရတယ်။ အမျိုးအစားကြည့်ရတယ်။ အရွယ်အစားကြည့်ရတယ်။ ခံစားနေရတာကြည့်ရတယ်။
(၁) Watchful waiting သိထားစောင်ကြည့်မယ်။ အလိုလိုပျောက်နိုင်တာရှိတယ်။
(၂) Birth control pills ကိုယ်ဝန်တားဟော်မုန်းပါဆေးပေးမယ်။
(၃) Surgery ခွဲထုတ်ပေးမယ်။ တချို့ကို (ဆစ်စ်) ကိုသာထုတ်နိုင်တယ်။ မျိုးဥိအမ်ကိုချန်ထားလို့ ဟော်မုန်းမနည်းစေဘူး။ ကလေးရစေမယ်။ သွေးဆုံးတာမဖြစ်စေဘူး။ ovarian cystectomy ခေါ်တယ်။ တချို့ကို မျိုးဥအိမ်ပါထုတ်ရတယ်။ oophorectomy ခေါ်တယ်။ ကင်ဆာလို့သိရင် မျိုးဥအိမ်နှစ်ုလုံး + သားအိမ် + သားအိမ်ပြွန် အကုန်ထုတ်မယ်။
- Chocolate cyst ချောကလက် ဆစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chocolate-cyst.html
- Endometriosis (1) သားအိမ်ရောဂါ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/endometriosis-1.html
- Endometriosis (2) သားအိမ်ရောဂါ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/endometriosis-2.html
- Endometriosis (3) သားအိမ်ရောဂါ (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/endometriosis-3.html
- Ovarian cancer မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/ovarian-cancer.html
- Ovarian Cyst ကိုယ်ဝန်မဟုတ်တဲ့ ဗိုက်ထဲကအလုံး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/ovarian-cyst.html
- PCOS and Ovarian cyst http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/pcos-and-ovarian-cyst.html
- Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီမမှန်ရင်ဖတ်ပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/polycystic-ovarian-syndrome-pcos.html
- Water bag ရေအိတ်ကိုသာ သိချင်တာပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-bag.html
▼ 2015 (2278)
Breast Cancer Risk ရင်သားကင်ဆာ အန္တရာယ်များ
U-15 ယူ-၁၅ ဖလားပွဲ
Flying abortion pills ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး မောင်းသူမဲ့ေ...
Date of birth မွေးနေ့
My Good Friends ဟေ့ ငယ်ချင်းရေ့့
Male contraception is coming ယောကျားသုံး ကိုယ်ဝန်တ...
Shocked country ရှော့ခ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်
Fournier gangrene ဖေါင်းနီးယား ဂင်ဂရင်း
UTI in children ကလေးတွေဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း
Gangrene (ဂင်ဂရင်း) အသားသေသွားခြင်း
Surgery for chronic low back pain နာတာရှည်ခါးနာခြင...
Genital warts in women အမျိုးသမီး လိင်လမ်းကြွက်နို့
Polygamy and Health (1) မယားများများယူရင် (၁)
First cousins marriage မောင်နှမတဝမ်းကွဲ လက်ထပ်ခြင်း
Boxes အခိုးခံရသော ပုံးများ
Level playing field ဆင်ချေးကျုံးများနေ့
Royal Sword သံလျက်တော်ပျောက်မှု
Grateful to you ဝမ်းမြောက်ရပါ၏
S.T.EYE condoms that change color when they come i...
Pregnancy and Sleeping pills ကိုယ်ဝန် နဲ့ အိပ်ဆေး
Pregnancy Wi-Fi router causes controversy in China
Insecticide Lindane causes cancer
By order of the dictatorship နုတ်ကျိုးနေသူများ
NSAID အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သတိပေး
Train passengers ရထားစီးခရီးသည်များ
Semen Leakage သုက်ရည်ထွက်ကျခြင်း
Caffeine and Pregnancy ကေဖင်းနဲ့ကိုယ်ဝန်
Alcohol အရက်ဋီကာချဲ့ခြင်း (၃)
Dreadful news မြန်မာပြည်က ကြောက်ခမန်းလိလိများ
Prison and jail health care အကျဉ်းသားကျန်းမာရေး
Alcohol and pregnancy အရက်နဲ့ကိုယ်ဝန်
BLACK မည်းရာက ဘာလို့မမည်းတော့သလည်း
25 years ကျွန်တော့်အဖြစ် ၂၅ နှစ်
Not that simple ပေါ့ပေါ့လေး တွေးလို့မရပါ
Cooperation ပေါ့တဲ့၊ ဟဲဟဲ တဲ့
Black and Vote အမည်းနဲ့ မဲ
History happens twice နောက်ကြောင်းမပြန်နဲ့တဲ့
Footwear doctor ဖိနပ်စီးတဲ့ဆရာဝန်များ
Eyes on the Moon လမင်းမှာ
Happy father’s Day as well as Happy Grandfather’s Day
Daily routine နေ့တဓူဝ အကျွန့်ဘဝ
HIFU FAQs ပြင်းအားများ အာလ်ထွာဆောင်းနည်းနဲ့ကုသခြင်...
Focused ultrasound surgery for uterine fibroids သာ...
Uterine Fibroid Embolization (UFE) သားအိမ်အလုံးကို...
TB Medicines Side Effects တီဘီဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆို...
Radiofrequency ablation (RFA) ရေဒီယိုဖရီကွင်စီနည်း...
HIFU ကင်ဆာကုသဘို့ရာ ရန်ကုန်မှာစက်သစ်ဖွင့်ပြီတဲ့
Birth month may predict risk for certain diseases
Beta blocker ဘီတာဘလော့ကာဆေး
Too posh to push ဗိုက်ခွဲမွေးတာ တကယ်လိုသလား
Sayar အတတ်လည်းသင် ဆရာဝန်
Election campaign စည်းရုံးရေးနှစ်မျိုး
The difference ကွာခြားချက်
Own glimmer ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ရှိကြသူများ
New anti-malaria drug developed at Dundee University
Thailand confirms first case of deadly MERS virus
Bird food ငှက်စာ
Underarm odor ချိုင်းချွေးနံ့
High heels are pleasure with pain
Blood Types and population သွေးအမျိုးအစား ဘယ်ဟာမျာ...
Penis Injection Risks (2) ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့ အန္တရာ...
Penis Injection Risks (1) ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့ အန္တရာ...
Quack အရပ်နည်း ထပ်ပြီးမလုပ်ကြပါနဲ့
Lion spelling ခြင်္သေ့သတ်ပုံ
ကာ နဲ့ ကော်
Up to you လွတ်လပ်မှု အပြည့်အဝခံစားနိုင်ကြသော လူနာများ
Supernumerary nipple နို့သီးအပို
Smoking Causes 12 Different Kinds of Cancers
Not arrogance မာနမဟုတ်ပါ